Iqembu laphesheya liqinisekise ukusayina umdlali weBafana | isiZulu
Iqembu laphesheya liqinisekise ukusayina umdlali weBafana
Iqembu livikela umdlali walo osolwa ngokuhlukumeza owesifazane
Cape Town – Iqembu elidlala kwi-English Championship, iBrentford FC, isikuqinisekisile ukuthi isisayine umdlali weBafana Bafana, uKamohelo Mokotjo inkontileka yeminyaka emithathu yesamba semali esingadalulwanga, kubika iKickOff.com.
Izolo iKickOff.com ibike ukuthi lo mdlali qembu lesizwe lakuleli ogijima esiswini uqale wahlolwa ngokwesimo sempilo eLondon ngaphambi kokuba ashiye iFC Twente, nokuyiqembu uMokotjo agcine edlala kulona amasizini amathathu edlule.
OLUNYE UDABA: Angase angadlali oweSundowns egcina izinto zebandla lakwaShembe
Ama-Bees asesiqinisekisile lesi sivumelwano, nosekusele ukuthi lo mdlali abe namaphepha amvumela ukuthi angasayina neqembu lasezweni langaphandle (international clearance).
Umqeqeshi weBrentford, uDean Smith, utshele i-website yale kilabhu “Ngijabule ngokuthi sikwazile ukwengeza uKamo eqenjini lethu manje useyatholakala. Ungumdlali ebese sinesikhathi silokhu simbheka futhi sinesiqiniseko sokuthi uzongena khaxa ohlelweni kanye nesitayela esinaso la.
“UKamo umdlali wasesiswini okwazi ukwakha umdlalo, ahambe ibange elide bese esebenzisa ibhola ngobuhlakani. Ungumdlali nakanjani ozokwengeza esikwatini.”